Fametrahana SEO amin'ny motera fikarohana | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | Tambajotra sosialy
Rehefa manao fikarohana isika, ohatra ao amin'ny google, dia misy lisitry ny valiny samihafa. Matetika izahay no mijery ny vokatra voalohany. Ary raha tiantsika hiseho amin'ny toerana tsara ny orinasantsika, ahoana no hahazoantsika azy? Ny valiny dia SEO.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny dikan'ny fanafohezana SEO. Izy ireo dia avy amin'ny teny anglisy "Search Engine Optimization" ary azo adika hoe "Optimization for search engine", izany hoe ny anjara andraikitr'izy ireo dia ny fametrahana ireo tranokala samihafa mba hahazoana antoka ny mpampiasa ny valiny tsara indrindra, ireo izay mifanaraka indrindra amin'ny filan'izy ireo. .
Noho izany, dia ny dingan'ny fanatsarana ny fahitana tranokala iray, mametraka azy amin'ny toerana lehibe fikarohana, takatra amin'ny hoe google, yahoo, sns. SEO dia karazana fametrahana toerana voajanaharySatria tsy karamaina izy io hiseho amin'ny toerana tsara indrindra, dia tratra izany amin'ny alàlan'ny tetika, paikady ary fampandrosoana tsara ny tranokala.
SEO dia manana sandan'ny marika satria ny mpampiasa dia mampifandray ny toerana tsara amin'ny tranokala amin'ny fahamendrehan'ny marika, ankoatry ny toerana tsara toerana dia miteraka fitsidihana maro kokoa.
1 Inona avy ireo lafin-javatra raisin'ny SEO?
2 Ahoana no fiasan'ny motera fikarohana?
3 Iza no mahazo tombony amin'ny SEO?
Inona avy ireo lafin-javatra raisin'ny SEO?
Ny SEO dia manambatra singa roa, etsy an-daniny dia manisy fiheverana ny fomba fiasan'ny motera fikarohana ary amin'ny lafiny iray hafa, ny fomba fikarohana ataon'ny mpampiasa. Tena zava-dehibe ny fanatsarana ny tranonkala hanamorana ny fampahalalana ao amin'ny tranonkalantsika mba hametrahan'ny motera fikarohana antsika tsara. Noho izany, ny famotopotorana ny fomba itadiavan'ny mpampiasa ny vokatra na serivisinay amin'ny motera fikarohana dia ilaina hahazoana vokatra tsara.
Ahoana no fiasan'ny motera fikarohana?
Ny fahatakarana sy ny fahazoana ny fomba fiasan'ny motera fikarohana dia tena ilaina mba hahafahana manatanteraka paikady mahomby. Voalohany indrindra, tadidio foana fa ny motera fikarohana mahafeno ny filan'ny mpampiasa vaovao. Ny valiny dia havaozina matetika amin'ny alàlan'ny algorithma, midika izany fa afaka miova ny toerana.
Iza no mahazo tombony amin'ny SEO?
SEO dia manolotra tombontsoa sy fitaovana samihafa. Zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy ny orinasa rehetra no mampiasa an'io fitaovana io miaraka amina tanjona mitovy, ka noho izany dia tsy hitovy ny paikady, tsy misy torolàlana henjana arahiny. Tsy maintsy mamorona fikarohana momba ny vokatra na serivisy atolotray, ohatra, isika raha manana vokatra tena vaovao, ary noho izany, tsy misy ho an'ny mpihaino mety ho lasibatra, dia tsy ho tanterahina izany, ka izany no ilana hanatanterahana azy teo aloha. hetsika marketing izay manome azy hahalala.
Noho izany dia tsy tokony hialantsika amin'ny fampiasana ny fitaovana SEO ho tetikady mahaleo tena, izany hoe, tsy maintsy ampidirina ao amin'ny drafi-barotra izany. Ny fanatontosana ny firaisan-kina tanteraka amin'ny asantsika rehetra dia hiantohana fa ahatratra ireo tanjona napetraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Inona ny SEO?
Milton Glaser dia mamaky an'i Madrid: fampirantiana iray mampiseho ny afisiny malaza indrindra